အဖြေ - Zhangzhou Lilliput Electronic Technology Co. , Ltd.
OEM & ODM ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် spreadsheets နှင့် paper များကို Lilliput mobile data terminal (MDT) ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ယာဉ်မောင်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အစိတ်အပိုင်းများမန်နေဂျာများနှင့်အခြားဝန်ထမ်းများအားသူတို့လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းမီခြင်းအားဖြင့်သင်၏စင်းကိုအပြည့်အဝအပြည့်အဝအသုံးချပါ။ Lilliput Mobile Data terminal (MDT) ကို Android, Linux, WinCE, Windows OS နှင့်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည် 3G / 4G၊ CAN၊ Wi-Fi၊ Bluetooth၊ ကင်မရာ၊ GPS၊ ACC၊ POE စသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကြမ်းတမ်းသည့်တက်ဘလက်ကိုတက္ကစီ၊ ဘတ်စ်ကား၊ ကားများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သတ္တုတွင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာယာဉ်များအဖြစ်) ထရပ်ကားများ၊
မိုဘိုင်းဒေတာ terminal သည်ယာဉ်အားယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လိုင်စင်နှင့်လိုက်နာမှု၊ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မတော်တဆမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ခွဲထုတ်ခြင်း၊ ယာဉ်ဆက်သွယ်ရေး (ခြေရာခံခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်း)၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လောင်စာဆီစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မော်တော်ယာဉ်ပြန်လည်အရောင်းအ ၀ ယ် ....
Lilliput အားလုံးသည်တောက်ပသော resolution နှင့်အကြမ်းခံမှုများဖြင့်တာရှည်ခံသည့်စက်မှုပြသမှုများရှိသောစက်မှု panel panel ရှိ PC နှင့်ကြမ်းတမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်မှု touch screen PC များသည်တုန်ခါမှု၊ ထိတ်လန့်မှု၊ အစိုဓာတ်နှင့်ထိတွေ့မှု၊ ဖုန်မှုန့်၊ ပူးတွဲသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းဘောင်, သူတို့ကအရမ်းစိတ်ကြိုက်, တာရှည်ခံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များတွင်စက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်း importan အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်, ဥပမာ။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးကုသမှု၊ HMI၊ port terminal စသည်ဖြင့်အသိဉာဏ်ရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် (HDMI, VGA, USB, RS232, RS422, RS485, LAN, GPIO)၊ ကွဲပြားခြားနားသော OS စနစ် (Android) , Linux, WinCE, Windows), multi-functions များ (3G / 4G, CAN, Wi-Fi, Bluetooth, ကင်မရာ၊ GPS, ACC, POE) နှင့်မတူညီသောလျှောက်လွှာအတွက်လမ်းကိုတပ်ဆင်ခြင်း။
With the development of science and technology, more technology products have appeared around us, which has continuously improved our living standards. Same as many technological products, Lilliput all in one panel pc သက်တမ်းကိုအဆင်ပြေစေရန်နှင့်ပျော်စရာကောင်းစေသည်။
သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်အဆင်ပြေစွာပြသရန် Lilliput သည်စျေးကွက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ လုပ်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုရန်နှင့်အဆင်ပြေသောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် PC ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်နေရာများစွာရှိသည်။ ဆေးရုံမှအဝေးထိန်းစမတ်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်၊ ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုအမိန့်စက်၊ စီးပွားရေးနှင့်ပညာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စွမ်းအင်၊ လူနေအိမ်နှင့်စမတ်အိမ်၊ မာလ်တီမီဒီယာကြော်ငြာစက်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Lilliput စီးပွားဖြစ်ကွန်ပျူတာသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကွဲပြားသော OS စနစ် (Android, Linux, WinCE, Windows)၊ ကြွယ်ဝသော interface (HDMI, VGA, USB, RS232, RS422, RS485, LAN, GPIO), multi-functions (3G / 4G၊ CAN၊ WiFi၊ Bluetooth၊ ၎င်းသည်မတူညီသောလျှောက်လွှာနေရာအတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်။
လူနေအိမ်နှင့် Smart အိမ်
လိပ္စာ: Fu Qi မြောက်လမ်းမကြီး၊ Lan Tian စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်, Zhang Zhou, Fu Jian, 363005, China
© Copyright - 2020-2021 LILLIPUT : All Rights Reserved. ကုန်ပစ္စည်းများ Hot - Sitemap - AMP Mobile
စက်မှု Panel ကို PC, Meeting 10.1" ANDROID PANEL PC, embedded စက်မှု PC, Lilliput Mobile Data Terminal , industrial 10.1" ANDROID PANEL PC, Mobile Data Terminal ၊